Ọnụ ọgụgụ 2020 SaaS Churn Rate | Martech Zone
Wednesday, November 11, 2020 Tọzdee, Eprel 1, 2021 Jafar Sadhik
Anyị niile anụla banyere Salesforce, Hubspot, ma ọ bụ MailChimp. Ha ewetawo n'ezie oge mmụba SaaS eto. SaaS ma ọ bụ sọftụwia dị ka ọrụ, dị mfe, bụ mgbe ndị ọrụ jiri sọftụwia ahụ dabere na ndenye aha. N'inwe ọtụtụ uru dị ka nchekwa, obere nchekwa, mgbanwe, nnweta n'etiti ndị ọzọ, ụdị SaaS egosila na ọ ga-amị mkpụrụ maka azụmaahịa na-eto eto, melite afọ ojuju ndị ahịa na ahụmịhe ndị ahịa.
Mmefu ngwanrọ ga-eto na 10.5% na 2020, ọtụtụ n'ime ha ga-abụ SaaS chụpụrụ. SaaS na ígwé ojii arụ ọrụ enwetawo ọbụna mmụba n'ihi Covid-19 na 57% nke ụlọ ọrụ na-eme atụmatụ ịbawanye arụmọrụ ha.
Gartner na Flexera
Enwere ike ịkọwa uto SaaS n'ihi nsonaazụ dị egwu emere site na iji ahịa, ọganiihu ndị ahịa, ahịa na nchekwa. E nwere ike iji azụmaahịa SaaS tụnyere osisi. Ibi, ịnye, na-agbanwe agbanwe, na-eto eto, na nkwekọrịta mgbe oge ruru. Ka azụmahịa ahụ na-eto, ndị ahịa na-abịa ma na-ala. Ndị a churn udu nwere ike mmetụta azụmahịa gị na-etinye na-agaghị emeli na ahịa mgbasa na ibu.
SaaS Churn Rate: kọwara
SaaS churn rates, tinye ya, ma gosipụta ọnụego nke ndị ahịa gị dị ugbu a kwụsị / kagbuo ndenye aha ha na oge akọwapụtara.
Ọ bụ ngosipụta nke otu onye ọrụ si etinye ego na onyinye gị gbasara arụmọrụ, ebumnuche, ọnụahịa, na nnyefe. Churn ọnụego na-ekpebi ihe ndị ọzọ, olee otú gị ngwaahịa nwere ya na onye ahia ya.
Maka uto SaaS, mmụba uto (ntinye aka ọhụrụ, nsogbu, wdg) ga-agarịrị karịa ọnụọgụ ego (kagbuo, ndị debanyere aha ha furu efu).
Isi Iyi: Kwupụta
Ebe ọ bụ na e buru amụma na SaaS ga-eto eto n'ụwa nile, njigide ndị ahịa na ihe ịga nke ọma ndị ahịa dị mkpa belata ọnụ ọgụgụ SaaS. Ebe ọ bụ na afọ ojuju ndị ahịa bụ otu n’ime ihe dị iche na ndịiche dị n’etiti ụlọ ọrụ na-aga nke ọma na ndị ọzọ, ahụmịhe ndị ahịa abụrụla akụkụ dị mkpa nke ọganiihu azụmaahịa yana uto ụlọ ọrụ.
Iji mee ka emelitere gị na usoro ọhụụ ma mụta ihe ị ga-ezere, anyị achịkọtara ndepụta nke 10 SaaS Churn Statistics maka 2020.
Etu ị ga-esi gbakọọ ọnụego churn
Ọ nwere ike ịdị ka ihe dị nfe, mana ịgbakọ Churn Rate maka sọftụwia dịka Ọrụ, enwere ụfọdụ nuances. Nanị, Churn Rate bụ ọnụọgụ ndị ahịa fọdụrụ site na ọnụọgụ ndị ahịa niile na mbido oge a tụrụ… gbakọọ dị ka pacenti. Nke a bụ Churn Rate usoro:
Ihe ị ga-ebu n'uche mgbe ị na-atụle Churn:
Must ga-ewepụ ndị ahịa niile si na nchịkọta ndị a. Churn bụ naanị a tụnyere nke kagbuo vs. ẹdude ahịa.
Must ga-agbakọ site na iji otu oge ahụ, mana nke ahụ nwere ike ịbụ aghụghọ. Ikekwe ụfọdụ ndị ahịa nwere nkwekọrịta ogologo dị iche iche, usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche, ma ọ bụ onyinye… nwere ike ị chọrọ ịkepụta ngụkọta oge dabere na nke ọ bụla iji hụ ma ọ bụrụ na ndị ahụ emetụta.
Kwesịrị ịkwalite ndị ahịa gị ọzọ site na ngwakọta ngwaahịa ma ọ bụ ngwugwu nke edebanyere aha ha. Nke a ga - enye gị nkọwa zuru ezu banyere etu ọnụahịa gị ma ọ bụ ngwugwu ngwaahịa gị si emetụta oke.
Kwesịrị ị gbakọọ ọnụ ọgụgụ gị na-adabere na isi iyi nke ire ere na ihe ọnụ ahịa nnweta bụ. You nwere ike ịchọpụta na oke ọnụọgụ nke ngwa ahịa gị kachasị ukwuu nwere ike ime ka atụmatụ azụmaahịa ahụ ghara ịkwado ahụike ụlọ ọrụ gị.
Kwesịrị ị gbakọọ churn na a mgbe niile na-edebe gị na ọnọdụ na churn na ma ọ na-amụba (ogbenye njigide) ma ọ bụ mma (ahịa iguzosi ike n'ihe) karịrị oge.
Churn abụghị ihe ọjọọ mgbe niile… ọtụtụ ụlọ ọrụ SaaS na-eji churn iji dochie ndị debanyere aha na-abaghị uru na ndị ka baa uru. Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnwe ọnụọgụ na-adịghị mma n'ọnọdụ ndị a, azụmaahịa gị ga-aba uru karịa na ogologo oge. A maara nke a dị ka Ego na-adịghị akwụ ụgwọ kwa ọnwa (MRR) Churn, ebe ego gi puru na ndi ohuru na ndi ahia di ugbua karie ego ha na enweta site na ndagide na nkagbu.
10 SaaS Churn Statistics maka 2020
SaaS churn na oge nkwekọrịta - companieslọ ọrụ SaaS ndị nkwekọrịta ha na ndị ahịa ha nwere afọ 2 ma ọ bụ karịa nwere ike ịkọ ọkwa ọnụ ala. Nkwekorita ogologo oge, ma ọ bụ kwa afọ ma ọ bụ karịa, emeela ka ọnụ ọgụgụ dị ala na ụdị ndebanye aha ọnwa na-enwe ọnụego ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 14%. Enwere ike ịgụta nke a iguzosi ike n'ihe, ahụmịhe onye ọrụ, na ihe ịga nke ọma ngwaahịa n'etiti ndị ọzọ.
Onu ogugu na onu ogugu - companieslọ ọrụ ndị na-eto eto dị ala na ndị na-amalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa. Imirikiti ụlọ ọrụ na-eto eto, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 42%, na-ahụ ọkwa dị elu karịa ụlọ ọrụ ndị toro eto. Enwere ike ịsị nke a na ngwaahịa, mbọ azụmaahịa, ma ọ bụ omume ndị ahịa.
Ogologo Afọ Ọchịchị Median - Maka azụmahịa ndị na-erughị $ 10 nde kwa afọ, 20% bụ ọkara kwa afọ SaaS churn rate. Companieslọ ọrụ SaaS dị ala na-atụfu ihe dịka 5% na 7% nke ego ha na-enweta kwa afọ. Nke a pụtara, ihe karịrị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ụlọ ọrụ SaaS nwere 5% ma ọ bụ karịa ọnụego afọ n'otu afọ. Ọzọkwa, a na-ewere 5-7% 'ihe ọkụkụ a na-anabata' dabere na ogo nke nzukọ ahụ.
SaaS Churn Rate na Ahịa - Ahịa na onye ahịa ya bụ isi iji jigide onye ahịa ya na ịchụ ego. Dabere na MarketingCharts, ọwa ahịa nwere nnukwu nsogbu na 17% ebe ahịa ahịa na-ada na 11% na 8%. N'ime ahịa nwere ọnụọgụ nke 14%. Nke a na-ekwenyeghachi mkpa nke mmekọrịta ndị ahịa na mbọ ahaziri ichekwa na idowe ma na-abawanye iguzosi ike n'ihe ndị ahịa.
Ngwa ngwa ngwa na SaaS Churn Rate - Ọnụ ọgụgụ njigide kwa ọnwa site na ngwa mkpanaka na 41.5% bụ mkpughe. Nke a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge 4 dị elu karịa ahụmịhe onye ọrụ na ihu weebụ dị ka Reply.io. Mkparịta ụka mkpanaka mmekọrịta na-elekwasị anya na nnyefe ngwaahịa enyela aka na nke a na-ebelata ngwa ngwa.
Ọrụ Ndị Ahịa na Ọnụ Ọnụ - Mgbe 47% kwadoro azụmahịa ma ọ bụrụ na ọ nyere ezigbo ọrụ ndị ahịa na nzaghachi, 42% hapụrụ ndenye aha SaaS n'ihi ọrụ ahịa dara ogbenye. Ndị ọrụ chọrọ ka ahụmịhe ahụ bụrụ nke na-enyere ndị ahịa aka ịga nke ọma. Enwere mkpa iji kwalite iji nweta ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa iji belata ọnụego churn.
Onu ogugu ndi ahia na onu ahia - Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 69% nke ụlọ ọrụ SaaS na-ewere ọnụ ọgụgụ ndị ahịa ka ha na-atụle mgbe ha na-atụle ọnụọgụ ego. 62% na-eji ego ha enweta dị ka isi ihe ha na-eji amata ọnụọgụ ego. E wezụga nke a, ikikere ndị ọrụ bụkwa ụzọ ọzọ iji tụọ ọnụego churn.
Onyinye Ahịa Ọhụrụ na Ọnụ Ahịa - Ndị ụlọ ọrụ na-ebute ụzọ nnweta ndị ahịa ọhụrụ ka ha nọgide na-ese n’elu mmiri ma melite ọnụọgụ. Naanị 59% na-eme ka ndị ahịa ọhụụ na afọ ojuju dị ka ihe kacha mkpa. Enweghi ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa na-eme ka ọnụọgụ dị elu. Ntinye aka na ire ere nwere nnukwu ikike maka ịgbasa azụmahịa.
Ndenye SaaS ngwa ngwa - Ọtụtụ ụlọ ọrụ SaaS na-eto ngwa ngwa nwere nkezi Ndenye ngwa ngwa nke 3.9 ruo 1. Ọ bụ ezie na akara Mamoon maka ụlọ ọrụ SaaS na-ekwe nkwa bụ 4, ụlọ ọrụ egosila nsonaazụ ọma site na iwepụta ego ha furu efu.
Mụbara Churn udu - Ọ bụ ezie na 34% nke ụlọ ọrụ hụrụ ka ọnụọgụ ọnụọgụ ha belata, 30% kwuru na ọnụọgụ ọnụọgụ ha abawanyela. Enwekwara ike iburu n’obi na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-akọ ọkwa dị elu na-ewepụta ihe na-erughị $ 10 nde.
N'okpuru ala: Mee ka SaaS gị rapara
Ọ dị mkpa ịghọta na njigide ndị ahịa, iguzosi ike n'ihe, na ihe ịga nke ọma bụ isi ihe na-akpata ọganihu azụmahịa na ihe ịga nke ọma. Site n'ime ihe ahụmịhe ndị ahịa n'oge, onye nwere ike belata ọnụego churn. Ọ dịkwa mkpa inyere ndị ahịa gị aka na SaaS ka ha nwee ike nweta nghọta bara uru ma nabata nzaghachi ha iji melite ahụmịhe onye ọrụ na imepụta ngwaahịa. Ving na-edozi nsogbu onye ọrụ yana iji ihe eji eme ihe nwere ike inye aka belata ọnụego ọkụ ma kwalite uto.
Tags: gbakọọ ọnụego churnchurn ngụkọta ogesaassaas churnsaas churn uduọnụ ọgụgụ saas churnskas ngwa ngwa ruru